'सुन तस्करीमा नेताहरुको संलग्नताको पनि सूचना छ'
विशेष अनुसन्धान समितिका संयोजक ईश्वरराज पौडेलसँग अन्तर्वार्ता
जेठ ८, २०७५| प्रकाशित १८:४६
डेढ महिनायता देशमा सुन तस्करीको विषय निकै चर्चामा छ। एक समूहले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सेटिङ मिलाएर ५ वर्षदेखि सयौं किलो सुन तस्करी गरेको खुलेर वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीहरु समेत पक्राउ परेपछि यसको चर्चा सर्वत्र फैलिएको हो।
गत माघ ९ गते तस्कर समूहले विमानस्थलबाट भित्र्याएको साढे ३३ किलो सुन हराएपछि लुटेको आशंकामा तस्करी गिरोहमा आबद्ध मोरङ उर्लाबारीका सनम शाक्यको हत्या भयो। महानगरीय अपराध महाशाखाले शाक्यको शव बरामद गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा बुझायो। तर, हत्याका योजनाकारलाई महाशाखाले उन्मुक्ति दिनेगरी अनुसन्धान गरेको भन्दै गृह मन्त्रालयले सह–सचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा विशेष अनुसन्धान समिति गठन गर्‍यो।
समितिले तस्करी प्रकरणका एकपछि अर्को पाटो बाहिर ल्याइरहेको छ। जसका क्रममा शाक्य हत्या र सुन तस्करी प्रकरणका मुख्य पात्र ‘गोरे’ भनिने चुडामणि उप्रेतीलाई मंगलबार समितिले पक्राउ गरी सार्वजनिक गर्‍यो। उनी पक्राउ परेसँगै तस्करी प्रकरणका थप रहस्यहरु खुल्ने संयोजक पौडेल बताउँछन्।
अनुसन्धान समितिका संयोजकका रुपमा पहिलो अन्तर्वार्ता नेपाल लाइभलाई दिँदै उनी आफूहरुले पूर्णरुपमा निष्पक्ष छानबिन गरिरहेको र यसमा नेताहरुको समेत संलग्नता देखिए उनीहरुलाई पनि नछाडिने बताउँछन्। पौडेलसँग नेपाल लाइभका नवराज मैनालीले गरेको कुराकानीः
आज पत्रकार सम्मेलनमा सुन तस्करीको अनुसन्धान जेरी जस्तै जेलिएको बताउनुभयो। २/४ जना प्रहरी, एयरलाइन्सका केही कर्मचारी र तस्कर मात्र मिलेर त्यस्तो बलियो जालो बनाउन सफल भए होलान् र?
अहिलेसम्ममा सुन तस्करी प्रकरणमा करिब ७० जनाको संलग्नता खुलिसकेको छ। प्रहरीको भाषामा भन्दा यसमा ठूलो र्‍याकेट देखिन्छ, त्यसलाई हामीले पहिचान गर्न सफल भएका छौं।
अहिले देखिएको जालो भएको एउटा दुबईको हो। एउटा समूह दुबईमा र अर्को समूह काठमाडौंमा बसेर हुन्डीको धन्दा चलाउँछन्। त्यस्तै, एउटा समूहले नेपालमा सुन मगाउँछ भने अर्कोले दुबईबाट पठाउँछ। यसरी सुन र हुन्डीको ४ तहको र्‍याकेट देखिन्छ। यो सञ्जाललाई सञ्चालन गर्न आ–आफ्नो ठाउँबाट सहज बनाइदिने समूह पनि छन्। राज्यका अधिकारप्राप्त व्यक्तिहरु भएर पनि त्यसलाई संरक्षण गर्ने वा अनुचित हिसाबले लाभ लिने हिसाबले पनि कतिपय यो प्रकरणमा जोडिएका छन्।
हामीले अहिलेसम्म ४ तहको र्‍याकेट फेला पारिसकेका छौं। थप र्‍याकेट खुल्दै जालान्। अझ र्‍याकेटभन्दा माथि ‘ज्याकेट’ भन्नुस् न! त्यो छ भने पनि वस्तुगत र तथ्यगत भएर हामी आग्रह, पूर्वाग्रह नराखीकन अनुसन्धान गरी कारबाही गर्छौं। अनुमानको भरमा कसैलाई ल्याएर झ्याप्पै ठोकिहाल्ने भन्ने मानसिकता हामीले कहिल्यै पनि बनाउनु हुँदैन। तर, सूक्ष्म ढंगले केलाउँदै जाँदा तथ्यहरु भेटिए र प्रमाणहरु आए भने तपाईंले संकेत गरे जस्तो चाहे जोसुकै होस्, हामी त्यहाँसम्म पुग्छौं नै।
अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा यो तस्करीमा राजनीतिक तहको संलग्नता नभेटिएकै हो?
अनुमानकै भरमा राजनीतिक संलग्नता छ भनेर भन्न सक्दैनौं। राजनीतिक संलग्नताको प्रमाण भेटियो भने हामी छाड्दैनौं।
जसरी प्रहरीका अधिकारीहरुलाई हामीले मुद्दा लगेका छौं, केही देखिएरै उहाँहरुलाई लगिएको हो नि। लेजरमा लेनदेनका कुरा देखिए, फोनमा नियमित सम्पर्क देखियो। त्यसपछि उहाँहरु त्यहीँ कार्यरत रहेको अवधि पनि मिलान हुन्छ। उहाँहरु जुन अवधिमा एयरपोर्टमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो, त्यही बेलामा यो सबै तस्करी भइरहेको थियो। ३/४ प्रमाण भेटिएरै उहाँहरुलाई समाइएको हो। अनुमानको भरमा फलानो राजनीतिक पार्टीको फलानो नेता जेडिनुभएको छ भनियो भने त भोलि अदालतले छाडिहाल्छ। त्यसो त गर्नै भएन नि!
राजनीतिक संलग्नता भए/नभएको केही संकेत त पाइसक्नुभएको होला नि?
सूचनाहरु त आएका छन्, ती सूचना र संकेतको भरमा कति अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने हो। यो भन्दै गर्दा हामी त्यहाँसम्म पुग्न सक्दैनौं, पुग्न खोज्दैनौं भन्ने होइन।
छानबिनका क्रममा दबाव र प्रभाव कत्तिको झेलिरहनुभएको छ?
हामीलाई कतैबाट पनि दबाब र प्रभाव छैन। काम गर्नका लागि हौसला मिल्दो वातावरणमा काम गर्न पाएका छौं, त्यो अनुसारको म्यान्डेट पनि पाएका छौं। कसैको दबाब र प्रभाव पटक्कै छैन।
डेढ महिनापछि ‘गोरे’ पक्राउ परेका छन्, उनले सुन तस्करी गरेको स्वीकार गरे?
उनले स्विकारेका छन्। उनीबाट थप तथ्य खुल्ने हाम्रो अपेक्षा छ।
सुन तस्करीमा उनको भूमिका कस्तो देखिन्छ?
उनको लगानी पनि देखिन्छ। तस्करीको मेनेजर त हो नै, तस्करी र्‍याकेटको मुख्य पात्र पनि हो।
५ वर्षदेखि विमानस्थलबाट सुन तस्करी भइरहेको रहेछ, ४/५ जना मात्र प्रहरीको सहयोगमा त्यो सम्भव भयो होला र?
यसमा पनि राजनीतिक संलग्नताको कुरा जस्तै विषय आउँछ। अरु पनि संलग्न छन् भने त प्रमाण भेटिनुपर्‍यो। कि अरुको संलग्नताबारे कसैले बोल्नुपर्‍यो, कि पोल्नुपर्‍यो, कि खोल्नुपर्‍यो। ‘विमानस्थलमा ३ सय जना कर्मचारी कार्यरत छन्, यी ३/४ जना मात्र किन’ भन्ने प्रश्न जसरी बाहिरबाट आइरहेको छ, उहाँहरुले के बुझ्नुपर्छ भने सबै कुरा प्रमाणले निर्धारण गर्ने हो। प्रमाणले जोड्दा उहाँहरु पर्नुभयो, प्रमाण नभेटिएकाहरु छुटेका हुनसक्छन्। यसबाट थप पुष्टि के हुन्छ भने हामी पूर्वाग्राही छैंनौं। पूर्वाग्रही भए त सबैलाई समाइहाल्थ्यौं नि!
अर्काे कुरा, प्रहरीप्रतिको हाम्रो सम्मान सदैव छ र रहिरहनेछ। प्रहरीको बर्दीमा दाग लगाउनेहरु, कर्तव्यबाट विचलित भएर कानुनको पालना गर्नुपर्नेमा अपराधीहरुसँग जोडिन जानेहरु त संगठनका लागि पनि घातक व्यक्ति हुन्। हाम्रो अनुसन्धान तिनीहरु विरुद्ध लक्षित हो, प्रहरी विरुद्ध होइन। हामी प्रहरीको बर्दीको सम्मान गर्छौं। प्रहरीमा लागेको दाग त मेटाउनुपर्‍यो नि! प्रहरीको बर्दी आफैंमा ठीक छ, दाग मात्र मेटाउनुपर्ने हो। मेरो अनुसन्धान टिममै प्रहरीहरु हुनुहुन्छ। महिनौंदेखि प्रहरीहरु मेरो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँहरुले निर्वाह गर्नुभएको भूमिका के मेरोभन्दा कम छ त? छैन नि।
विमानस्थलमा काम ‘कम्प्लेक्स जब’ हो। विमानस्थलमा राम्रोसँग आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने प्रहरीहरु पनि त हुनुहुन्छ नि। त्यहीँभित्र धमिराहरु पनि छन्। धमिराहरुलाई हामीले निकाल्न खोजेका हौं।
गोरे समूहले मात्र करिब ३८ सय किलो सुन तस्करी गरी ल्याएको तपाईँहरुले दाबी गर्नुभएको छ, त्यो सुन कहाँ गएको देखिन्छ?
त्योमध्ये केही आन्तरिक बजारमा खपत हुन्छ र बाँकी भारतसम्म पुग्छ भनिएको छ। केही बयानबाट त्यो देखिएको छ। यो पाटोमा थप अनुसन्धान जारी नै छ।
केही प्रहरीले सुन तस्करहरुलाई सहयोग गरेको प्रमाण भेटियो, उनीहरु पक्राउ पनि परे। तर, सनम शाक्य हत्याको अनुसन्धानमा लापरवाही गरेको भन्दै केही प्रहरीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ, त्यो चाहिँ उनीहरुमाथि अलि अन्याय भयो कि भन्ने खालका टिप्पणीहरु पनि आइरहेका छन् नि?
त्यो कुरा आएको छ। तर, त्यो पाटो चाहिँ अदालतले पनि के हो भन्ने ठहर गर्ला। यो अदालतमा विचाराधीन पनि भइसकेको विषय भयो।
अर्काेतर्फ, उहाँहरुले अपरेसन त गर्नुभयो, नतिजा के आयो भन्ने कुरा गम्भीर विषय हो। क्षेत्राधिकारदेखि मोडल अपेरान्डी (अनुसन्धान शैली) सम्मका कुरामा प्रश्न उठेका छन्। उहाँहरुले जुन कार्यविधि अपनाएर अनुसन्धान गर्नुभयो, त्यसका विभिन्न आधारको विश्लेषण गरेर मात्र हामीले त्यो निर्णय लिएका छौं।
अर्काे कुरा, महानगरीय अपराध महाशाखाको विषयमा चाहिँ मोरङको सरकारी वकिल, जो अभियोजनकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँहरुले यसको विश्लेषण गरेर अभियोजन गर्ने/नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नुभएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अनुसन्धान अधिकृत र अभियोजनकर्ता मोरङको सरकारी वकिल हुनुहुन्छ, उहाँहरुले के आधारहरु लिएर अभियोजनमा जानुभयो, त्यसको हामी सम्मान गर्छौं।
सर्वसाधारणले प्रश्न गर्न थालेका छन्- गोरे त भेटिए, साढे ३३ किलो सुन चाहिँ कहिले भेटिन्छ?
सुन पनि छिटै भेटिनेछ। जेठ मसान्तसम्म हाम्रो म्याद छ। यो अवधिभित्र थप धेरै कुरा खुल्नेछन्।
५ वर्षसम्म एउटा समूहले विमानस्थल ‘कब्जा’ गरेर अर्बौंको सुन तस्करी गरिरहेको रहेछ, यसबाट हाम्रो राज्य संयन्त्र निकम्मा जस्तो लागेन?
मुलुकमा शासन र सुव्यवस्था कमजोर भएको अवस्थामा यस्ता प्रवृत्ति मौलाउँदा रहेछन्। यसबाट मैले सिकेको के हो भनेदेखि हामीसँग भएका संस्थागत संरचनाहरु र कानुनहरु यथेष्ट छन् र त्यसको कार्यान्वयनको पाटो फितलो छ।
त्यो फितलो पाटोलाई टेकेर अनुचित लाभ लिने प्रवृत्ति छ, त्यस विरुद्ध निर्मम प्रहार हुनुपर्छ। त्यो प्रहार चाहिँ अहिलेको सुन तस्करीको अनुसन्धानले त्यसको जग पक्कै पनि तयार पार्छ। यसले मुलुकले लिएको सुशासनको बाटोमा हामी अगाडि बढ्न सहयोग गर्ला।
अनुसन्धानका क्रममा तपाईँलाई अनौठो र रोचक लागेका केही विषय छन्?
अनौठो लागेको विषय के भने, इमान्दार भएर प्रयास गर्यो भने प्रहरी भन्नुस्, प्रशासन भन्नुस्, हाम्रा राज्यका अन्य संरचनाहरु भन्नुस्, सबै सक्षम छन्, हामी जत्रोसुकै मिसनहरु पनि पूरा गर्न सक्छौं। हामीले आफ्नो क्षमता पनि चिन्ने मौका पाएका छौं। एउटा महत्वपूर्ण विषय त्यो हो।
अर्काे चाहिँ, नेपालमा सुन तस्करहरुले कसरी थाई एयरलाइन्सलाई माध्यम बनाएर सुन तस्करी गरे भन्ने अनौठो छ। थाई एयरलाइन्सलाई भर्‍याङ बनाएर अद्भूत तरिकाले सुन तस्करी गरिएको थियो। तस्करी गर्नेहरु सबै नेपाली दाजुभाइहरु हुन्, थाई एयरलाइन्सका कोही पनि विदेशी कर्मचारीहरु संलग्न छैनन्।
थाई एयरलाइन्सको कर्मचारी सानु वन गाडीले किचेर मरे, पिएल चौधरीले आत्महत्या गरे। थाई एयरको जुन इञ्जिनियरिङ टिम छ, उनीहरुको कामबारे थाई एयरलाइन्सको टिमलाई केही पत्तै छैन। उनीहरुले थाईलाई सजिलै तस्करीको माध्यम बनाएका छन्, त्यो चाहिँ मलाई अद्भूत लाग्यो। एयरलाइन्सको शौचालयबाट भर्‍‍याङमा सुन छिराउने बुद्धि, त्यो भर्‍याङलाई मेकानिकलसम्म लिएर आउने, भर्‍याङलाई समेत मोडिफिकेसन गर्ने। यो हेर्दा यिनीहरुसँग अद्भूत क्षमता छ। त्यो क्षमता यस्ता कर्तुतहरुमा प्रयोग गरे। राम्रो कामका लागि त्यो बुद्धि लगाएको भए कस्तो आउँथ्यो होला नतिजा? खुराफात बुद्धि बडो गजबको प्रयोग गरेका छन्। यसको पनि हामीसँग भिडियो र प्रमाणहरु छन्।
अनुसन्धान गर्ने क्रममा यो घटनाबाट कतै नेपालमा थाई एयरलाइन्सले आफ्नो उडान नै बन्द गर्ने त होइन भन्नेतर्फ पनि हामी सजग भयौं। थाईको सिनियर टिमसँग हामी २/३ पटक बस्यौं पनि। एयरलाइन्सको माथिल्लो तहको संलग्नता छैन, यसमा नेपाली कामदारहरु मात्र संलग्न छन् भनेर प्रस्ट पार्‍यो।
यसबाट अदालत मोटाउँछ। यसलाई नै प्रगति भन्ने हो भने भन्नु केही छैन।